5 Beyonce ဘို့မေးခွန်းလွှာ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
5 Beyonce ဘို့မေးခွန်းလွှာ
ဂီတငါ့အသက်ကို၏ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစဉ်မပြတ်ငါအကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုမည်သို့စဉ်းစားတာပါ. ငါ့ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းမရှိဘဲအနုပညာခံစားဘို့ဒါဟာခက်ပါတယ်, ယူပြီးမှတ်စု, နှင့်မေးခွန်းများမေး. Beyonce အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိူင်ငံရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရှိပြီးသူမသိသာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများဆုံးချစ်ရာသခင်သည်ပေါ့ပ်ကြယ်တစ်င်. ပင်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီး ကပြောပါတယ် သူမအခြားမည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်လျှင်, သူမ Beyonce ဖြစ်ချင်ချင်ပါတယ်.
Beyonce သူမအစဉ်အဆက်ကတည်းကရဲ့ထက်ပိုရေပန်းစားသည်, ဒါကြောင့်သင် TV ပေါ်မှာလှည့်မနိုင်သို့မဟုတ်သူမ၏အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုမြင်လျှင်မပါဘဲအွန်လိုင်းရ, သူမ၏အယ်လ်ဘမ်သစ်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှသူမ၏သမီးနှင့်အတူလမ်းပေါ်ကိုဆင်းလျှောက်လှမ်းသူမ၏၏ဓာတ်ပုံများကိုမှ. ငါသူမ၏အခွက်တဆယ်အားဖြင့်အထင်ကြီးနှင့်သူမ၏ drive ကိုအားဖြင့်မှုတ်သွင်းတာပါ, ငါမူကားလည်းငါမြင်အချို့သောအရာအားဖြင့်စဉ်းစားရခက်တာပါ.
Beyonce နဲ့ကျွန်မဘုံထဲမှာအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုမ. ကျနော်တို့တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကနေနှစ်ဦးစလုံးအနေဖြင့်, နှင့်ဟူစတန်ရှိမိသားစုအများကြီးရှိ. ကျနော်တို့တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်၏တူညီသောအရေအတွက်ပတ်ပတ်လည်ဖြန့်ချိမယ့်သူအနေနှစ်ဦးစလုံးအနုပညာရှင်တွေ (သူမပဲနည်းနည်းပိုလူသိများငါ့ကိုထက်င်သော်လည်း). နောက်ဆုံး, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်၏လိုအပ်ချက်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးသည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုင်.
စိတျထဲမှာကအတူ, ဒီငါမေးနိုငျမေးခွန်းများကိုတချို့ရှိနေပါတယ်သူမ၏တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်, ငါအခုထိကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်ပြုပြင်တာပါအချို့သော.
2. Music ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စကားရပ်၏လှပသောပုံစံ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသွန်းလောင်းရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဘယ်မှာ, အကြံအစည်, နှင့်ကိလေသာ. ဒါပေမယ့်လူတွေကဂီတသန်းပေါင်းများစွာအဘို့လည်းသူတို့ဘဝမှတေးသံအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်, ထိုသို့၎င်းတို့၏ကမ္ဘာအမြင်များပုံစံသွင်းသွင်း. သင်ဘယ်လိုတစ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စကားရပ်နှင့်သင်ရှိသည်တာဝန်ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးကြဘူး?
3. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အလှတရားနှင့်လိင်ရန်သင့်အားဆွဲအာရုံထင်ပါသလား (အရာမကြာခဏသင်တို့၏အနုပညာမှ distracts) တူသီချင်းတွေကိုအတွက်သတင်းစကားကိုဆန့်ကျင်, "တော်တော်နှိပ်စက်တာ?” ထိုသီချင်းကိုခုနှစ်တွင်, သငျသညျစုံလင်ရှာဖွေလျက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသတ်ဖို့မငယ်ရွယ်အမျိုးသမီးတွေအားပေးအားမြှောက်ခံရဖို့ထင်ရ, နှင့်အစားသူတို့၏အပြုံးများထက်သူတို့၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့. ဒါပေမယ့်သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း meet- ကြောင်းသတင်းစကားကိုဆန့်ကျင်အလုပ်လုပ်သော beauty- ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံ၏စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်ထင်ပါသလဲ?
5. အဘယ်ကြောင့် Jay-Z ကသူ့လေးဆယ်၌ရှိ၏သို့သော်ငါ့ကိုထက်အေး?
Aran Rafael • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:12 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရစ် • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:13 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
တိုက်ခိုက်မှုမပြုလုပ်ရန်လုံလောက်သောတာ ၀ န်ရှိမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ခရစ်ယာန်များထံမှကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သောပို့စ်များသည်အလွန်စိတ်ဆိုးပြီးလှည့်စားခံနေရသည်.
TransformNotConform • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 9:29 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကြည့်ရတာကောင်းတယ်. ပြjustနာများကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသို့မဟုတ်လုံး ၀ မကျူးလွန်သောခရစ်ယာန်များသည်အော်ဟစ်သောလူများကိုတိုက်ခိုက်သည် “ခင်ဗျားသွားတာ။” သူတို့ဝန်ခံသောအရာနှင့်သူတို့မည်သို့ပြုမူသည်ကိုကောင်းစွာကြည့်ရှုရန်သူတို့ကိုနှိုးဆွပေးရုံသာပြုပါ. #CauseSomethingSureAintAddingUp ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခရီးစဉ်
Broc • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:14 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသူမနှင့် Illuminati နှင့်အတူသူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြောင်းကိုသူမ၏မေးလိမ့်မယ်. ဒါပေမဲ့ #5 ငါ့ကိုလှိမ့်ချ haha ​​ရှိခဲ့ပါတယ်
ဂျူလီယာ • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:15 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင်၏မေးခွန်းများကိုမည်သို့မည်ပုံရေးသည်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါသည်. သူမသည်လူငယ်များသာမကမိန်းကလေးများအတွက်အလွန်သြဇာညောင်းသည်. ဒါပေမယ့်ငါသဘောတူတယ်, တခါတရံသူမ၏အခွက်တဆယ်သည်သူမ၏အကသို့မဟုတ်အ ၀ တ်အစားမရှိခြင်းကြောင့်လွှမ်းမိုးနေသည်.
Andrew HaHa Ross • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:17 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မင်းပြောသမျှအားလုံးကိုမေတ္တာနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပုံစံနဲ့မင်းဘယ်လိုပုံသွင်းခဲ့သလဲဆိုတာငါကြိုက်တယ်. Beyonce & အခြားဖျော်ဖြေရေးသမားများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူငယ်များအတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာတွင်ရှိသော်လည်းအများစုသည်သူတို့၏အပြည့်အဝစွမ်းရည်နှင့်မပြည့်စုံပါ. သူတို့အတွက်ဆက်ဆုတောင်းပေးရမယ်. အားလုံးကောင်းစွာလူကိုမျှော်လင့်ပါတယ်. ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အတွက်ဆက်လုပ်ပါ!
မင်္ဂလာပါ • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:19 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါအဲဒီမေးခွန်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ပါတယ်. သူတို့ထဲကငါ့ဗားရှင်းအရမ်းရယ်စရာကောင်းတယ်. ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည် & ထို့အပြင်လူမျိုးများကိုဖွင့်လှစ်ရန်နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ကြသည်’ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်း
Debbi • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:22 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Fahina • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:25 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဟားဟား @ #5. ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင်, လူတိုင်းနီးပါးနှင့်မည်သူမဆိုအတွက်တရားဝင်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်တေးဂီတလုပ်ငန်းနယ်ပယ်သို့ဝင်ရောက်လိုသူ.
JonReagan • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:25 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ထိုအရာများသည်ကောင်းသည်ဟုထင်ပြီးလှုံ့ဆော်မည်ဟုထင်ကောင်းထင်သော်လည်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောဘုရားသခင်၏စွမ်းအားဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ. စင်ကြယ်သောospelဝံဂေလိတရားကိုသူမထံတင်ပြစေပြီးသန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်သူမတို့၏လမ်းစဉ်အမှားများကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပြသရန်ခွင့်ပြုပါစေ။. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, သူမသည်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဂရုစိုက်မယ်လို့အဘယ်ကြောင့်ငါမသိရပါဘူး. စကားမစပ်, သငျသညျ JayZ ထက်လမ်းအေးဖြစ်ကြသည်. Way Cooler!
Olivia • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:56 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်တော်ဒုတိယလိုက်မယ်- လမ်းအေး! :-)
Tenyll • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 1:00 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Leila. Bailey • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:27 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
#5 သော်လည်း။. ဟားဟား
မင်္ဂလာပါ • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:29 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤရွေ့ကား Trip Lee ၏ထူးကဲသောမေးခွန်းများကိုဖြစ်ကြသည်. ဒါဟာသူမဂီတကိုတရားမျှတအောင်ရပ်တန့်မယ့်အချိန်အကြောင်းပဲ။ စဉ်းစားကြည့်ပါ ဦး. ဒီအသည်ကြီး!
P.S. ကျွန်တော့်စေ့စပ်ထားသူကပြောသည် “nah, သင် Jay-Z ထက်အေးပါတယ်။” :) ဘုရားသခငျသညျသငျသညျ bro ကောင်းကြီးပေးတော်မူ.
Michelle • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:29 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါ Beyonce ကိုအမြဲချစ်တယ်. သူမသည်လှပနှင့်ပါရမီပါပဲ. ငါသည်လည်းနက်ရှိုင်းသောဘုရားသခငျနှငျ့ဆကျဆံရေးနက်ရှိုင်းတယ်. ငါဒီအမျိုးသမီးကိုချစ်ပေမယ့်, ငါသည်သင်တို့၏မေးခွန်းများကိုပြသနေကြသည်ခံစားချက်များကိုအတိအကျတူညီအမျိုးအစားရှိသည်ကြောင့်ငါတော့ဘူးသူမ၏ဂီတကိုနားမထောင်ကြဘူး. ငါသူမ၏အဖြေများကိုကြားချင်။ သူမဘဝကိုသူမည်သို့အကဲဖြတ်သည်ကိုကြည့်ချင်သောကြောင့်သင်သူမကိုဤမေးခွန်းများမေးရန်အခွင့်အရေးရလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်. ငါမစီရင်; သူမဘဝမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာပဲ. ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
Frank Gil • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:31 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကြီးမြတ်စာရင်း. ငါသူမ၏အဖြေကိုကြားချင်ကြတယ် #3. အံ့သြဖွယ်ခရီးစဉ်!
Justin • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:34 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီမေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်. ခင်ဗျားတို့ဟာတော်တော်များများကကောင်းကောင်းစဉ်းစားထားတဲ့အတွက်သူမအတွက်ကြီးမားတဲ့မေးခွန်းများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဟာအလွန်ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ, နှင့်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့လမ်း. သငျသညျအကြှနျုပျကိုနှင့်အခြားသူများကိုတစ် ဦး လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကြသည်. မျှော်လင့်သင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုထိ (ငါသိလိမ့်မယ်). ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ, ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်က Beyonce မှဝန်ကြီးပါလိမ့်မယ်!
Zaeria • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:36 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသိချင်တယ်, ယနေ့မျိုးဆက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏သင်၏တာဝန်အတွက်မည်သည့်နယ်နိမိတ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသတ်မှတ်ထားပါသနည်း၊. ဒါကြောင့် အကယ်., သင်ဘယ်လိုကိုင်တွယ်သလဲ? အကယ်. မရ, အဘယ်ကြောင့်? (ဘယ်မေးခွန်းကိုအပေါ် piggy ကျော #2)
SusanBonnerDunston • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:40 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းပြီ Trip ကဆိုသည်! မင်းကိုမြောက်ကာရိုလိုင်းနားမှာပထမဆုံးအကြိမ်သင်ကြားတုန်းကမင်းဟာဘုရားသခင့်စစ်မှန်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်
Olivia • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:43 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မင်းရဲ့ post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ငါမကြာသေးမီကသူမအကြောင်းအများကြီးရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုကိုတွေ့သောအခါ, နှင့် “သူမ” သူမ၏အပိုင်၏ပြောပြသည် (ဆာရှာပြင်းထန်) နှင့်သူမစင်ပေါ်မှာကခုန်လမ်း. ငါဂရမ်မီရဲ့ငါ့သားသမီးတို့နှင့်အတူစတင်စတင်ခဲ့ပြီးသူမဘူတာရုံကိုပြောင်းလဲရန်ငါ့ကိုတောင်းပန်ကခုန်စတင်သောအခါ. ဒီအချက်အလက်ကိုအခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာငါတို့ကလေးတွေဘယ်လိုရှုမြင်တယ်၊, ငါအမွေးအတောင်တွေအများကြီး ruffled. ရန်သူကလူတွေကိုသုံးတဲ့သိမ်မွေ့တဲ့နည်းနဲ့ကျွန်မအရမ်းနာကျင်တယ်, ငါတစ်ခါတစ်ရံကြမ်းတမ်းစွာချွတ်လာမှီတိုင်အောင်နေရာများနှင့်အရာတို့ကို. ငါနေဆဲသင်ယူနေပါတယ်ချင်ကြဘူး. ဤသည်အလွန်ကောင်းစွာထားအစ်ကိုဖြစ်ပါတယ်.
တိမောသေဘရောင်း • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:43 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ရီယို • ဇန္နဝါရီလ 31, 2014 တွင် 5:08 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သီဟသူရ • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:43 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အာမင်, ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ငါကိုယ်တိုင်သည်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရ၏ “မိသားစု” ခရစ်တော်၌ရှိသောအစ်မများနှင့်ညီအစ်ကိုများကိုဆိုလိုသည်… တူညီတဲ့မေးခွန်းများနှင့်စိုးရိမ်မှုများတင်ပြဘို့ငါ့မကြာသေးမီဆောင်းပါး Beyonce. မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဘုရားသခင်သည်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါသည်.
စင်ဒီ • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:48 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Ruthie • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခက်ခဲသောမေးခွန်းများကိုနှစ်သက်ပါ. မင်းနဲ့ Jay-Z နှစ်ခုလုံးကိုငါတွေ့ပြီ, ငါကွဲပြားခြားနားဖို့တောင်းပန်. စံနမူနာဖြစ်ဆက်လက်ပါ. နောက်လှည့်မကြည့်ပါနဲ့! ဆက်ကြည့်ပါ! သင်၏အသက်တာသည်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါစေ! သင်နှင့် Cross Movement တို့သည်ကျွန်ုပ်ကလေးများကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည်. ငါအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်လိမ့်မည်.
Allen • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤမေးခွန်းများကို Beyonce ကိုယ်တိုင်တစ်နေ့တွင်ဖြေလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်. ငါသူတို့ရေးထားတဲ့ပုံစံနဲ့စိတ်ရင်းရဲ့နှလုံးထဲရောက်ဖို့ဘယ်လောက်နက်ရှိုင်းတယ်ဆိုတာငါသဘောကျတယ် “အဘယ်ကြောင့်”
အဲလက်စ် • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:52 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Beyonce ကဒီ post ကိုလာလိမ့်မည်သို့မဟုတ်မည်မဟုတ်ပါ, ဒီမေးခွန်းတွေ, သို့မဟုတ်သင်၏အသက်တာ၌. သူမဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်သို့မဟုတ်ဂရုစိုက်မည်ဟုသူအလွန်သံသယရှိသည်. မေးခွန်းများမေးရန်လိုခြင်းမှာသူသည်သူမကိုင်တွယ်လိုခြင်းသို့မဟုတ်မခံစားရလိုသောဆန့်ကျင်မှုအချို့ကိုပြသခြင်းဖြစ်နိုင်သည်.
ဒါဟာမြင့်မားတဲ့အနုပညာထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ငါကကြီးမားတဲ့တာဝန်နှင့်အတူကြွလာထင်ပါတယ်. သူမ၏ကျော်ကြားမှု၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သည်ဤဆန့်ကျင်မှုများအပေါ်သူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်, သူတို့ကသူမ၏တွန်းအားပေးရန်ဆက်လက်. ငါမေးခွန်းတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိထင်ပါတယ်, သူမကသူတို့ကိုစဉ်းစားရန်ဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါ. မျှော်လင့်သူမကသူတို့ကိုစဉ်းစားရန်သူမ၏အသက်တာ၌တစ်ချိန်ချိန် n တစ် ဦး အနေအထားဖြစ်လိမ့်မယ်. ငါသူတို့မေးမွနျးခံခဲ့ရဝမ်းမြောက်မိပါတယ်.
နစ်ကီ • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:55 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မင်းရဲ့မေးခွန်းတွေကိုငါကြိုက်တယ်. သူတို့ကခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆျောထင်ကြသည်မဟုတ်. ဖျော်ဖြေရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရခြင်းဟာခက်ခဲပြီးသူတို့ဘဝမှာမီးမောင်းထိုးမယ့်အပြင်သူတို့ရဲ့ဘ ၀ တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်. သူတို့အနေအထားကြောင့်သူတို့သည်အမြဲတမ်းမီးမောင်းထိုးနေကြသည်ကိုသူတို့သဘောပေါက်မိပါသလား. အနုပညာရှင်တော်တော်များများကသူတို့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်တာလို့ပြောပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်တရားမျှတတယ် “ဖျော်ဖြေရေးပဲ။” ငါဘယ်မှာမသူမ၏ထံမှသိလို “အဲဒါကဖျော်ဖြေရေးပဲ” အဆုံး? လည်း, စံပြဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်သူမသည်သူမဂီတ၏ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအတွက်တာ ၀ န်ခံကြောင်းသူသိသည်(သူမသည်ကျောင်းများသို့ သွား၍ ကလေးများနှင့်စကားပြောခြင်းအားဖြင့်ထိုရာထူးကိုတက်ကြွစွာလက်ခံခဲ့သည်)?
တရားမဝင် • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 12:07 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ထိုမေးခွန်းများသည်ယုံကြည်သူများ၏အယူအဆများ၏စုစုပေါင်းဖြစ်သည်; ထင်ရှားကျော်ကြားသူများထဲမှများ၏မေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်မပွင့်လင်းဆက်လက်တည်ရှိနေသောယုံကြည်သူများ. ငါမကြာခဏထင်ပါတယ်, ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအနုပညာရှင်များသို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်လူတို့၏အမှားများကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်မြန်ဆန်ကြသည်။ ၎င်းသည်ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းသာမကအပြစ်စီရင်ခြင်းခံရသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သိသော… ငါတို့မူကား၊???. ဒါပေမဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ. Beyonce သည်ဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပါက, သူမ, သူမ, ငါသံသယနှင့်ယုံကြည်လိမ့်မယ်, ငါတို့တလျှောက်လုံးတွေ့ခဲ့တာကိုမြင်လာတယ်; ရိုးရှင်းစွာမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းအားဖြင့်.
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ (J.Z နှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်း) :)
Kym • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 12:15 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်တော်သဘောမတူပါ. သငျသညျဂျေး Z ကိုထက်အေးပါတယ် …မင်းရဲ့ဂီတကိုနားထောင်တဲ့လူငယ်တွေကိုပိုကောင်းအောင်သင်ပေးပြီးလှုံ့ဆော်ပေးမှာပါ…ပိုကောင်းအောင်နေပါ…ယေရှုကိုချစ်တယ်….သူတို့ရဲ့မိသားစုကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးစံထားထိုက်သူတွေအဖြစ်ကြီးပြင်းလာမယ်…အခုအေးမြပါပဲ. Beyonce ဟာလှပပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့သူမရဲ့သီချင်းဆိုပါစို့….”ငါငယ်သေးပေမဲ့အဆင်သင့်ပဲ”….မိန်းကလေးငယ်များကိုတပ်မက်ခြင်း၊ အပြင်၌လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊… ငါ့ 13 တူမ it..smh သီဆိုခဲ့သည်. အပြစ်တရားကိုအဘယ်ကြောင့်အားပေးသင့်သနည်း?
chim chalera • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 12:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီမေးခွန်းတွေအားလုံးတကယ်ပဲသူမပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်ဆိုရင်ငါစဉ်းစားမိမှာပါ။ အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေအားလုံးက beyonce နဲ့တူတဲ့အဲဒီ့အနုပညာရှင်အားလုံးနဲ့အံဝင်ဂွင်ကျပါ။.
မိုက်ကယ် III • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 12:19 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီခရီးစဉ်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့သည်. #5 ငါ့ကိုလှိမ့်ခဲ့ရတယ်. သို့သော်ဤအရာသည်မေးခွန်းများဖြစ်စေသောကောင်းမွန်သောအတွေးများဖြစ်သည်. ပြီးတော့အနုပညာရှင်ကလောကနဲ့သမ္မာကျမ်းစာနှစ်မျိုးလုံးကိုအပြီးသတ်ထိတွေ့မှုကိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်တင်တိုင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုမေးဖို့လိုတယ်.
Johnn K သည် • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 12:28 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို – ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းများ, နှင့်perfectlyုံရှုမြင်သုံးသပ်ကြ, bro! Natalie Grant လိုပဲကျွန်တော်မတ်တတ်ရပ်ပြီး living ည့်ခန်းကိုထွက်ခွာခဲ့တယ်. ငါပြသတာကိုကြည့်လို့ပဲ 13 နှစ်အရွယ်သားချင်တယ်, ပြီးတော့လောကဂီတလောကမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာသိချင်ခဲ့တယ်, ငါအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့်ထွက်ညှိအဖြစ် 10 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ. ရှိခဲ့ပါတယ်2သူအခိုင်အမာသောဖျော်ဖြေပွဲ, “အိုး, အဲဒါငါ့အမှားပဲ!” – ရော်ဘင် Thicke ပြီးတော့ Pharrell. ဒီသီချင်းတွေကဘာလဲဆိုတာတောင်သူသားသိလားမသိဘူး, သူဟာသိပေမယ့်ငါ့ကိုပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးဟုပြောသည် (လိင်နှင့် objectifying မိန်းမတို့။) ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးသီချင်းတွေရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိတယ်. Beyonce နှင့်အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်အချို့’ သီချင်းများသည်အမျိုးသမီးများအားသူတို့၏လိင်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသပြီးကန့်ကွက်သည်. မိဘနှစ်ပါးနှင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ဂရုမစိုက်သည့်ဤမျှများပြားသောကလေးငယ်များကို ဦး တည်စေသောဆိုးဝါးသည့်အပြစ်ကျူးလွန်မှုဖြစ်သည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာတပ်မက်မှုအပေါ်မှာအခြေခံတယ်… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါအလုံအလောက်ဟောပြောပါတယ်, ကောင်းသောအလုပ်, ဂီတကိုချစ်တယ်! – J ကို
အဲလက်စ် • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 12:32 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခဏစောင့်ပါ… သငျသညျရုံ SCRATCH ဘယ်လိုရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်း #5 ဤစာရင်းမှ! ဟားဟား
မိုက်ကယ် • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 12:36 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သူမကကမ္ဘာ့ဂီတကိုကိုင်တွယ်တဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ရတာလဲလို့သူ့ကိုမေးချင်ပါတယ်. သူမမှာခရစ်ယာန်နောက်ခံရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်, ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုပိုကောင်းခံစားရစေပါဘူး. သူမ, တခြားသူတွေလိုပဲ, ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောစံပြပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသော်လည်းအစားကျော်လူကြိုက်များရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်. ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အမေရိကန်ကိုချမှတ်သောစံကိုကျွန်ုပ်မုန်းပါသည်, အထူးသဖြင့်လူငယ်များအတွက်.
ပိုမိုပေါ့ပါးသည့်မှတ်စုတစ်ခုတွင်, ဂီတကိုချစ်တယ်. Jimmy Nedum နဲ့နောက်ထပ်သီချင်းတစ်ပုဒ်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်…..သို့မဟုတ်သူ၏နာမသည်သမျှ. ဟားဟား! Tho ကောင်းသောမေးခွန်းများကို.
နီကိုးလ် • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 12:47 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါနဲ့ကိုယ့်အကောင်းဆုံး Trip Lee အသံနဲ့ဖတ်ပြီးပြီလို့ပြောလိုက်ရုံပဲ….ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ဤရွေ့ကားအချို့ကြောက်မက်ဘွယ်မေးခွန်းများကိုဖြစ်ကြသည်! ကျွန်တော်ဒီအင်တာဗျူးကြည့်ရတာကိုနှစ်သက်ပါတယ်!!
Juanb • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 1:26 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ် Lee က! ငါမင်းကိုလူတွေအများကြီးမုန်းတီးမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ဘဝနဲ့ဂီတဟာယေရှုနဲ့အတူလမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်အားရှိစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွင်, ငါအားလုံးမေးခွန်းများကိုတကယ်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်. #4 ငါ့ထံသို့ထွက်မှီဝဲ. (ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေပဲ) လက်ထပ်ပြီးတဲ့ဘ ၀ ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့နည်းရှိတယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်. နှင့်ယေရှု၏နောက်လိုက်အဖြစ်, ယုံကြည်သူများသည်သူတို့၏လိင်မှုကိစ္စကိုဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်စိုးရိမ်မိသည်. ငါ့ကိုယေရှု၏စိတ်နှလုံးကိုမြင်ရန်ခဲယဉ်းသည်’ အချိန်ကုန်လူအများစုသည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ်းတမ်းရမ်းကားမှုကိုမြင်သောအခါတေးဂီတ / ဘဝတွင်ဖြစ်သည်. ကြောင်း၌မချစ်သောသူရှိပါတယ်. သွေးဆောင်မှုအတွက်အခွင့်အရေးပဲ. သခင်ဘုရားနှင့်သူတို့၏ညီအစ်ကို၊ ညီအစ်မများအားမည်သို့ဂုဏ်တင်ကြောင်းကိုစဉ်းစားသင့်သည်, ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ခရစ်ယာန်ရှုထောင့်မှလာသည်.
ဂျိုနာ • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 1:37 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဟုတ်တယ်, ငါမေးခွန်းချစ်တယ် #3!!! ငါအရမ်းအံ့သြခဲ့ကြရတယ်၎င်း၏အတိအကျ!
Keisha • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 1:45 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းပြီဟုဆိုသည်….ငါ့မှာရှိတယ် 1 သားနဲ့3အနုပညာရှင်တစ် ဦး အားသူတို့၏အကျင့်များဖြင့်ကြည့်ရှုရန်သူတို့ကိုပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးများနှင့်အလွန်ဝမ်းသာပါသည်. သူတို့ဖန်တီးသောအရာသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်မကိုက်ညီလျှင်. သင်၏စိတ်ဓာတ်ကိုကျွေးမွေးရန်သင်လိုချင်ပါသလား? ငါသည်သင်တို့ကို Jay-z ထက်နည်းလမ်း COOLER ဖြစ်ကြသည်ထင်ပါတယ်.
Nikki • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 2:08 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျ Jay-Z ကိုထက်နည်းလမ်းအေးဖြစ်ကြသည်! သင်ဒီကိုတင်ခဲ့သည်စိတ်ဝင်စားစရာ. ငါ B ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဖြတ်ပြီးလာကြ၏, “ငါတစ်ခါမှမပိုင်ဆိုင်ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခု,” အချို့သော 80 ရဲ့သီချင်းတွေကိုတဆင့်သွားနေစဉ် youtube ကအပေါ်နောက်ဆုံးညဥ့်. (??!!) သူမသည်အဖြူအတွင်းခံအမျိုးသမီးနှင့်စတင်ခဲ့သည်, ငါတောင်မှဒါခေါ်နိုင်လျှင်. ငါကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါ့နှလုံးကနာတယ်! ဒါဟာသူမကိုကြည့်ဖို့ဒါနာကျင်ပါပဲ & ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားလှပသော & အနုပညာရှင်တွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့လိင်ကိစ္စရောင်းစားနေကြတယ် & သူတို့ရဲ့လိင်ကြွား. သို့သော်, ငါမေးရန်ရှိသည်, သူတို့ဘဝ၌အဘယ်မှာရှိအမျိုးသားများဖြစ်ကြသည်? သူတို့၏ဘိုးဘေးများသည်အဘယ်မှာရှိကြသနည်း & ယောက်ျားတို့? B ရဲ့ဖခင် AND Jay-Z မဖြစ်သင့်သည် “တိုက်ပွဲ” သူတို့၌ရှိနှင့်သမျှသောအဘို့ ဖြစ်၍၊? သူတို့သူမ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မရသင့်ပါတယ် & သူတို့ထဲမှာအရာအားလုံးနှင့်အတူသူမ၏ဂုဏ်ပြု? ငါအမျိုးသမီးတွေသူတို့ကိုယ်သူတို့စော်ကားမှုကိုရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပထမ ဦး ဆုံးပြောလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါသည်လည်းပန်းကန်မှတက်ခြေလှမ်းရန်ယောက်ျားစိန်ခေါ်ပါလိမ့်မယ် & မိန်းမတွေကိုရိုသေလေးစားပါ. အမျိုးသမီးတွေကျင်းပတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဖန်တီးကြစို့ & သူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အလှအပအတွက်ဂုဏ်ပြုခဲ့သည် & ယောက်ျားလေးစားကြသည်ရှိရာ. ငါသည်ငါ့ဆပ်ပြာ box ကိုပယ်ရလိမ့်မယ်. :)
Pamela • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 2:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းပြီဟုဆိုသည်…ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲဒီမေးခွန်းတွေမေးခဲ့ရတယ်။ မင်းကတေးသီချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊, မင်းရဲ့ဘ ၀ ကိုရှင်သန်ရုံနဲ့တစ်ယောက်ယောက်ကအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကငါကြီးပြင်းလာတဲ့အခါငါလိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောနေတယ်. ထို့ကြောင့်သင်သည်ခရစ်တော်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်အမှန်တကယ်ခေါ်ဆိုပါကသေချာစေပါ, ခရစ်တော်ကိုကိုယ်စားပြုသောအရာများကိုလုပ်ဆောင်နေသည်, ဒါကြောင့်လူငယ်အချို့ကရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုတာငါယုံကြည်တယ်, ဘယ်သူ့ကိုသူတို့နောက်လိုက်ကြလိမ့်မည်. ငါကသူ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်သူသာလျှင်မျှော်လင့်ပါတယ်, ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူတို့ကိုသူတို့ကိုတွင်းထဲကိုဆက်ပြီးပို့ပေးမှာပါ. ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်တာ ၀ န်ခံသည်, ဘာလို့လဲဆိုတော့လုပ်ရပ်တွေကစကားလုံးတွေထက်အသံကျယ်တယ်. ချာ့ချ်တွင်စတင်ခဲ့သောဂီတပညာရှင်အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်ယာန်ချင်းဂီတကိုမထောက်ခံသောကြောင့်ကမ္ဘာသို့သွားကြသည်. – သူမ၏တုံ့ပြန်မှုကိုကြားလိုသော်လည်း ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာသူမယေရှုထံသို့ပြန်လာခြင်းကိုချစ်မြတ်နိုးလိမ့်မည်.
ကဗျာ • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 2:20 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Jay -Z Trip Lee သည်အေးဆေးသောနေရာအနီးတွင်မရှိပါ!
Chelbia • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 2:46 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
တစ်နေ့ကျရင်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့သူရဲ့စွမ်းရည်ကိုသူမသုံးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်….ကိုယ်တော်ကိုသာချီးမွမ်းခြင်း၊. သူသည်ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုရန်နှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားသည်. မာရ်နတ်သည်သူမ၏ခိုးယူခဲ့သည်. ဘုရားသခင်ကသူမကိုကျေးဇူးပြုပါစေ.
သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 2:47 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ပထမဆုံးအနေနဲ့မင်းအသံကိုငါကြိုက်တယ်!!! yeah သင်၏အသံ lol နှင့်သင် haha! ငါမေးခွန်းချစ်သောမေးခွန်းများအကြောင်း4နှင့်5ရယ်စရာကောင်းတယ်, Trip မအေး။. မင်းကမင်းကိုချစ်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတရား၊. တော်တယ်။. ထို့အပြင်သခင်ယေရှုသည်ယုံကြည်မှုအနေဖြင့်သာမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအများစုကိုကူညီပေးပါစို့။. ငါမပို Tho သူမ၏ဂီတကိုနားမထောင်ကြဘူး။.
တိုနီ • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 3:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သူမ၏ကားမောင်းသောအရာကိုပထမ ဦး ဆုံးအရာ? လူတစ် ဦး သည်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့လိုက်လျောစေမည်. သကြားကုတ်အင်္ကျီအလျှင်းမလိုပါ. လူတို့အားမှန်ကန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုရှိသော်လည်း၎င်း၏အဆုံးသည်သေခြင်းဖြစ်သည်. ဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်သားများဖြစ်ကြပြီးကယ်တင်ရှင်လိုအပ်သည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဘယ်လောက်ကြာမက်ဆေ့ခ်ျများရေလောင်းဆက်လက်သလဲ??? ကောရိန္သုမြို့ရှိအသင်းတော်၌ပေါလုတည့်မတ်ပေးခဲ့သည့်အရာနှင့်မတူပါ? အမှန်တရားကိုပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်.
Meredith • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 4:19 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းများကိုကျွန်ုပ်မေးမြန်းလိုသူများကိုပဲ့တင်ထပ်ပါ. ဒီလေးလေးစားစားနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးစရာမေးခွန်းတွေရဲ့သူမရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကျွန်တော်ကြားချင်ပါတယ်. ငါသည်လည်းထည့်သွင်းချင်ပါတယ် “သင့်ရဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့သီချင်းစာသားကသင့်ကိုတန်ဖိုးထားမှုကိုဘယ်လိုရောင်ပြန်ဟပ်သလဲ?” နှင့် “သင်၏အသစ်သောသီချင်းများသည်လိင်မှုကိုမြှင့်တင်သည်, သင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သင်၏လိင်. သင်၏ဆုလက်ဆောင်ဖြင့်သီချင်းနှင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးသောဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးသားရန်စဉ်းစားမိပါသလား?” ထိုအဟုတ်!..သင်ကျိန်းသေအေးဖြစ်ကြသည်, အများကြီးပိုကောင်း lyricist, နှင့်၏စစ်မှန်သောဥပမာ “အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ”! သင်၏ဂီတကိုလုံးဝချစ်မြတ်နိုးပါ!
ကရူ • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 4:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Yo ခရီးစဉ်! ကောင်းပြီဟုမေးသည်။ ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကာလသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်လူရွယ်များ၏ဘဝကိုလွှမ်းမိုးသည့်အနုပညာရှင်များ၏ပြသနာများကြောင့်မေးခွန်းထုတ်ရန်မလိုခဲ့ပါ။. ပြန်ရက်များ, သူကပါးနပ်သောလူရမ်းကားမှပြောကြားသည်ကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရသည် “သူကသူ့သီချင်းထဲမှာကဆိုပါတယ်သောအရာကိုအပေါ်ပြုမူသူကိုမဆိုဆိစနစ်တကျကြီးပြင်းမခံခဲ့ရပါဘူး” ငါ whaaa ကဲ့သို့ဖြစ်၏?! သူကသူဟာဖျော်ဖြေသူပဲလို့ပြောပြီးသူတို့လေ့လာသင်ယူတာကကလေးတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီးသူနဲ့ငါတူတယ်ဆိုတာပါပဲ, “ဆရာတစ်ယောက်ကပြောတယ်,၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏သင်ကြားရေးအတွက်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းသားများသည်သူတို့လေ့လာသင်ယူရာအတွက်တာဝန်ရှိသည်?.” ၎င်း၏ရုံအရူး fam. ငါ Bey အတွက်ပျော့ပျောင်းသောအစက်အပြောက်ရှိသကဲ့သို့ငါသည်လည်းသူမ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြည့်ဖို့ရှည်လျားသကဲ့သို့ငါတိုင်းမေးခွန်းတစ်ခုကိုချစ်၏. kruseaphix.wordpress.com တွင် y'all စစ်ဆေးနိုင်သည်ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်၏နောက်ပို့စ်တွင်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်ကိုင်တွယ်လိမ့်မည်
John Mansaray • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 4:36 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကောင်းပါတယ်; သင့်နောက်လိုက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားဖွင့်ပေးခြင်းသည်ထူးခြားသည်. အများအားဖြင့်, ခေါင်းဆောင်များသည်သူတို့၏နောက်လိုက်များအပေါ်တွင်မာနကြီးခြင်းနှင့်သာလွန်ခြင်းအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းထားလေ့ရှိသည်. သို့သော်ဤရာထူးသည်အလွန်နက်ရှိုင်းပုံရသဖြင့်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းသည်ဇွဲရှိရန်အားပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအားပေးသည်. ငါဒီ post နှင့်ပတ်သက်။ ငါ့အအမှန်တကယ်ခံစားချက်တွေကိုစကားလုံးများကိုထားနိုင်ကြောင်းအလိုရှိ၏, ဒါပေမယ့်ဒီ’ ငါတတ်နိုင်သမျှအနီးကပ်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
Gteqnix • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 4:40 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Yo ခရီးစဉ်, မေးခွန်းကောင်းများ. တကယ်လို့သူမကအဖြေပေးရင်၊ အမှတ်က ur ကိုလုပ်ထားတာလားဆိုတာမပြောပါနဲ့. သူမ၏ပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်သူသည်သူမကိုထောက်ပြရန်လုံလောက်သောဂရုစိုက်သင့်သည်…buh ခရီးစဉ် trippin anit, အေးဂျင့်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရမ်းကောင်းတယ်ဂျေးက ur လိဂ်မှာမပျော်ဘူး…
ဗစ်ကီ • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 5:40 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
“သခင်ဘုရား, သင် Trip နှင့် B အကြားစကားပြောဆိုမှုအဖြစ်မှန်စေလိမ့်မယ်?”
ဂယ်ရီ • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 6:05 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကိုယ်ကြိုက်တယ်။. နှင့်နံပါတ်5ဟားဟား
JOECLER • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 7:34 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Allison • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 7:34 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါမေးခွန်းများမှန်ကန်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ မကြာခဏသူမအမေဖြစ်နေသည်ကိုညှိနှိုင်း။ မရသည့်အချို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတွေးမိသည်. သူ့မှာသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ငါတို့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ငါတို့လိုစောင့်ကြည့်နေတယ်. ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတက်ဖို့နာမည်ကြီးတယ်ဆိုတာသူမအင်တာနက်ပေါ်မှာသူမပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့နားထောင်ရန်ဘာမှမလို့ 1.1.Six နဲ့ Reach Records ကိုအလွန်လေးစားတယ်။
ယောဟနျသ • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 8:34 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သူမသည်ယေရှုကိုလိုအပ်သည်. ဒါပေမယ့်သူမလုပ်နိုင်တာကသူမကိုသူ့အသက်ကိုပေးရမယ်. သူမသည်သူမအတွက်သူ၏ဘုန်းအသရေကိုစွန့်လွှတ်လိုစိတ်ရှိမည်ကိုသံသယများစွာရှိသည်. ဒါပေမယ့်သူမဟာ ၀ ိုင်းဝိုင်းလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူမဟာနိုင်ငံတော်အတွက်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလဲ.
နာတာရှည် • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2014 တွင် 5:13 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
JennB • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 8:51 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
နှုတ်ကပတ်တရား၏အဓိပ္ပါယ်ကိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် “အေးတယ်” ဂျေး Z ကိုညွှန်ပြမထားဘူး…. #တောင်းပန်ပါတယ်
မစ္စဂျီ • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 9:00 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ် Lee က, ငါထင်ပေမယ့်မေးခွန်းတွေဂီတအနုပညာပုံစံ၏အလငျး၌ဆွေမျိုးခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါအတန်ငယ်မြဲမြံစွာပေါ့. ဒီမေးခွန်း, ကျနော့်အမြင်အရသူမသည်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်းကိုအိမ်မှမောင်းထုတ်ခြင်းမပြုပါ (အနည်းဆုံးတော့ငါထင်တာကတော့သူမသည်သူမနှင့် St. ယောဟနျသ UMC).
JSok • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 9:15 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းသောစကားလုံး Trip. ငါမှတ်ချက်များစွာကိုတန်ဖိုးထားတယ်. လေးနက်သောခရစ်ယာန်များကလူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှုသည်သူတို့တင်ပြသောအရာများနှင့်စဉ်း စား၍ အပြန်အလှန်တွေ့မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ရခြင်းကအားရှိစရာပင်. Bro site ကိုချစ်တယ်, သင်၏ခရစ်ယာန်ဓမ္မအမှုကိုဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါရန်ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းပါ.
Otia ကိုးလ် • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 9:59 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါဆိုသည်ကား, ဒါကဒါပဲလေ. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ကိုခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်. မင်းပြောသလို,”သင်နှစ် ဦး စလုံးအပြစ်သားများဖြစ်ကြပြီးဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်လိုအပ်နေသည်”. ခြားနားချက်မှာ, သငျသညျနှုတ်ကပါဌ်တော်ကဘာလဲဆိုတာသိနှင့် Beyonce မ. ပျောက်သောသူများနောင်တရပြီးသူတို့၏ဆိုးသွမ်းသောလမ်းစဉ်များမှလမ်းလွှဲရန်ဆုတောင်းပါ. Tripp, ကောင်းသောအကျင့်ကိုအမြဲကျင့်။ ယေရှုခရစ်၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့
ABOWN • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 10:23 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မေးခွန်းကောင်းများ! ငါသူမ၏မကြာသေးမီကဂရမ်မီစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ရှုအဖြစ်, ငါစိတ်ပျက်ခဲ့တယ်, နှင့်ဝမ်းနည်း. ငါစဉ်းစားအဖြစ်, ငါသူ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်, ငါသူမသူမ၏ခင်ပွန်းအားဖြင့်ဖုံးလွှမ်းမခံခဲ့ရသဘောပေါက်လို့ပဲ. စစ်မှန်သောအချစ်ကဖုံးလွှမ်းထားသည်, သင့်ရဲ့ဇနီး၏အဝတ်အချည်းစည်းကမ္ဘာကြီးကိုထိတွေ့ခွင့်ပြုမထားဘူး.
သုည • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 10:51 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါဒီရေးသားခဲ့သည်လမ်းကိုချစ်၏. ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ပြုကောင်းသောမေးခွန်းများကို, ကောင်းပြီညီအစျကို ! #အားပေးတယ်
Chepe • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:52 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
kimeka • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 12:21 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းပြီသငျသညျငါတစ်လလုံး Bey နှင့်ပတ်သက်။ အကြောင်းကိုဖတ်ပြီးကြပြီအနှိမ့်ဆုံးလူတစ် ဦး မဟုတ်. ဤကြီးမြတ်သောပုံသက်သေချမှတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
Chelbia • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 5:34 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသူမကိုနားထောင်လေ့ရှိတယ်, bcz ငါသူမ၏အသံကိုအလွန်ချစ်ကြတယ်! ယခုမူကားသူမ၏ဂီတအားလုံးငါ့အိမ်ထွက်သွားပြီသူမကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားပေးအားမြှောက်ဖြစ်ပါတယ် bcz, ခြယ်လှယ်, နှင့်ပုန်ကန်သောအပြုအမူ. ငယ်ငယ်ကတည်းကငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးများအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးရန်သူမကိုလှည့်စားနေသောနတ်ဆိုးများရှိသည်. ငါဝမ်းနည်းတာကငါ့သမီးကိုကာကွယ်ဖို့လိုတယ်5ဘုရားသခင်၏မိန်းမဖြစ်သင့်သော်လည်းယခုမှောင်မိုက်နိုင်ငံအတွက်အသုံးပြုသောအလွန်ကောင်း။ ပါရမီရှင်အမျိုးသမီးများမှနှစ်ပေါင်းများစွာ. တစ်ခါတလေသူမဒီကိုသတိထားမိလားသိလား? ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နှင့်သူမ၏အတွင်း၌သူမကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းကိုကောင်းစွာသိသည်… ဒါပေမယ့်ငါသူမအကျဉ်းသားလိုခံစားရတယ်။ သူမအတွက်လွယ်ကူသောလမ်းထွက်မရှိ… ယေရှုတစ် ဦး တည်းသာဆက်ဆံသည်! အံ့ဖွယ်အဘို့ဆုတောင်းကြပါစို့! ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသနားတော်မူပါစေသော!
ရာခေလ • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 6:27 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါ Trip Lee နဲ့သဘောတူပါတယ်, မှလွဲ…. သူ Jay-Z ထက်အများကြီးအေးရဲ့… ထို့အပြင်သူသည်အနန္တတန်ခိုးရှင်၏အေးမြသောအရိပ်ထဲတွင်မီးငရဲထက်ဖြစ်လိမ့်မည် ;)
သူမ၏ herblessedseeds • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 9:10 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
တစ်ချိန်ကမိမိကိုယ်ကိုကြေငြာခဲ့သောခရစ်ယာန်ဘာသာ Beyonce ထံမှယုံကြည်မှုနှင့်အမှန်တရားအချို့ရရှိရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဤတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုစတင်လိုသောဆန္ဒကိုကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။. ဒီစကားပြောဆိုမှုဆက်လုပ်သင့်ပါတယ် , ကိုယ့်ကိုကိုယ် , ခရစ်ယာန်များနှင့်လူတိုင်း . ကျနော်တို့အမှန်တရားအတင်းရန်မလိုပါ , စိုက်လိုက်ရုံပဲ . Sylvia Fanali မြက်ပင်မျိုးစေ့များ, Facebook နှင့် Instagram ကိုပေါ်မှာ
ဗစ်ကီပီဇာ • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 9:14 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါ Trip Lee ကိုချစ်တယ်.
PJ • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 9:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး! ဤသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်! ပွိုင့်ဖြောင့်, ဒါပေမယ့်နေဆဲလေးစားမှု. ငါတို့ခရစ်ယာန်တွေဟာသူမကြောင့်အမြဲတမ်းခွင့်ပြုခဲ့ပုံရသည့်ဘီယွန်းစဲဖြစ်ပျက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးနေသည်ကိုငါသိသည်။ “ယုံကြည်ခြင်း”.
Taniqua • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 11:53 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင်၏မေးခွန်းများကကျွန်ုပ်ကို Beyonce ကိုမည်သို့ရှုမြင်သည်ကိုစဉ်းစားစေခဲ့သည်. ငါသူမအလွန်ပါရမီင်ထင်ကြဘူး. ငါသူမ၏ယာဉ်လေးစားပါတယ်. သူမထိုမေးခွန်းများကိုမည်သို့ဖြေဆိုမည်ကိုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မယ်. သီချင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဂရိတ်အမှတ်. သူမသည်မိန်းကလေးများကိုမိမိကိုယ်ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်မသတ်ရန်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်, သူမစုံလင်ခြင်း၏ကမ္ဘာ့စံနှင့်တွေ့ဆုံ….. Hmmm တ ဦး တည်းစဉ်းစားစေသည်.
ကျောက်တုံး • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 12:11 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကိုယ့်ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုကြိုက်တယ်5သင်အတိတ်ရတစ်ချိန်ကယူဆတယ် 40 မင်းကအေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်မှာလားအေးအေးဆေးဆေးနေလို့မရဘူး…ရှင်းရှင်းလင်းလင်း
မင်္ဂလာပါ • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 12:49 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မေးခွန်းများ, ခရီးစဉ်ကို! ကျွန်ုပ်၏နားကြပ် playlist တွင်အချို့သောခရီးသွားသံစဉ်များထွက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ဤစာဖတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်!
သင်၏မေးခွန်းများသည်နက်ရှိုင်းသည်, စစ်မှန်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် sensitivity ကို, နှင့်ဂရုစိုက်သောနေရာမှလာပုံရသည်. သို့သော်ဤ Mega-superstar သည်သင်၏မေးခွန်းများကိုအဘယ်ကြောင့်ဖတ်သင့်သနည်း, ထိုမျှမက၊? ကောင်းစွာ – ငါ့ရှုထောင့်ကနေ – သူမလုပ်သင့်သည်, ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကသူမကိုဘာမှမတောင်းဘူး၊!
အထောက်အထားကဘာလဲ? ကောင်းစွာ, ငါအခုနားထောင်နေတယ်…”ဒါဟာ Self- စာမေးပွဲများအတွက်အချိန်ပါပဲ, ကျွန်တော်တစ် ဦး Self- စာမေးပွဲလိုအပ်ပါတယ်, က Self- စာမေးပွဲများအတွက်အချိန်ပါပဲ, ကျနော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး Self- စာမေးပွဲလိုအပ်ပါတယ်!”
Beyonce ကထွက်စစ်ဆေးပါ! မင်းရောပဲ, ဂျေးဇ! (ဒါဟာကိုယ်ပိုင်စာမေးပွဲဟုခေါ်တွင်ပါတယ်) :-)
ကိုးခု • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 5:28 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဟေ့ခရီး, သင်၏မေးခွန်းများသည်ရိုးရှင်းပါသည်, သေးလှုံ့ဆျောထင်ခဲ့တယ်. ၎င်းသည်စာဖတ်သူကိုမိမိကိုယ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းချေးငှားသည်, ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ ကိုလက်ခံယုံကြည်လက်ခံထားသော of ၀ ံဂေလိတရားနှင့်ထိုက်တန်သောကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များကိုရှင်သန်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုခံစားခြင်း, ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှမောက်မာရာအရပ်ထဲက, ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းနှိမ့်ချခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏. ချစ်ခြင်းမေတ္တာ. ချစ်ခြင်းမေတ္တာ. ချစ်ခြင်းမေတ္တာ. စင်ကြယ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မရဏနိုင်ငံထက်အားကြီး၏. ငါချိုမြိန် beyonce စေသည်သူဘာလုပ်တယ်ဘာကြောင့်သို့မဟုတ်အဘယ်အရာကိုမသိ dont. သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်ရန်နှင့်လှုံ့ဆော်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ထားပါသည်, နှင့်အစေခံ. နှလုံးသားကကိစ္စရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောမေးခွန်းများကိုမေးခြင်းသည်နှလုံးအတွက်ကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်. နှင့်နှိုးဆော်ခြင်းကောင်း ;)
p .s Jay z သည်ကျောင်းမှလူအတွက်အလွန်အေးလွန်းသည်
ဗေသနိရွာ • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 6:02 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်,ဤဆောင်းပါးအပေါ်ကောင်းသောအလုပ်. ငါကလူသူမ၏ bash ကြားနာဖို့ဒါတယ်,ဒါပေမယ့်စစ်မှန်သောမေးခွန်းတွေမေးတာကိုတကယ်ကြားရရင်သူမကိုတွေ့တဲ့အခါငါတစ်ခါတစ်ရံစဉ်းစားမိတဲ့မေးခွန်းတွေ. ငါဆောင်းပါးကိုတကယ်မဖတ်တော့ဘူး၊. ကောင်းသောအတွေးများ.
သွား • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 8:06 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
နင်ကြင်နာတတ်သော၊! ဤ blog တွင်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာများပြည့်နှက်နေသည်. ခရီးစဉ်အတွက်ကောင်းချီးပေးပါ!
ashanae • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 10:00 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါမေးခွန်းများအားလုံးနံပါတ်မှလွဲ။ နှင့်အတူအကြီးခဲ့ကြသည်ဟုပြောရပေမည် 5( သင်သော်လည်းကနေလာမယ့်ဘယ်မှာငါကြည့်ပါ, သို့သော် Jay-z သည်သခင်ဘုရားအတွက်အသက်ရှင်နေထိုင်သူတစ် ဦး ထက်အေး။ အေးဆေးစွာမအေးပါ။). သင်ထိုမိန်းမကိုသေချာစွာဂရုစိုက်ဟန်ရှိသည်. ငါမဆိုကောက်ချက်မှခုန်ချင်ကြဘူး, သငျသညျသူတို့အားတင်ပြပြီးနောက်သူမနှင့်အတူtheဝံဂေလိတရားကိုမျှဝေကြမှာမဟုတ်ဘူးသကဲ့သို့4ပထမ ဦး ဆုံးမေးခွန်းများကိုလှုံ့ဆျောထင်ခဲ့တယ်. သို့သော်, ငါသူချင်းမှတ်ချက်ပေးသူနှင့်သဘောတူသည်(JONREAGAN) ဒီ blog မှာ. /ဝံဂေလိတရားသည်တစ်ခုတည်းသောနှလုံး / စိတ်ကိုပြောင်းလဲသူဖြစ်သည်. သူမတစ်ယောက်ယောက်ဆီကကြားရင်တော့ကောင်းလိမ့်မယ်(သင့်လိုပဲ) သူလည်းဂီတတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပါတယ်(သငျသညျနှစ် ဦး စလုံးကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းအပေါ်ဖြစ်ကြသည်ပေမယ့်) ထိုသို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရဲ့အတိမ်အနက်ကိုငါသိ၏. ငါတို့သခင်ဘုရားအစေခံရန်သင့်ဆန္ဒအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Trip, ငါကဲ့သို့သောသူကိုလူတို့နှင့်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်theဝံဂေလိတရားကိုဝေမျှခြင်းတို့အတွက်အလွန်ကြောက်လန့်နေသူကိုအားပေးနေသည်. ဘုရားသခငျသညျသင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုကောင်းကြီးပေး!
ashanae • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 10:21 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
စိတ်မကောင်းပါဘူး, မင်းမေးချင်တဲ့မေးခွန်းထပ်ထည့်ဖို့မေ့နေခဲ့တယ်. သင်သူမကိုမေးလျှင်ကောင်းလိမ့်မည်: မိဘတစ် ဦး သည်မိမိကလေးများကိုမည်သည့်ဂီတ / သီချင်းစာသားအမျိုးအစားမှကာကွယ်သင့်သည်ဟုသင်ထင်သနည်း?
MichelleJ • ဇန္နဝါရီလ 31, 2014 တွင် 12:57 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါကစကားပြောဆိုမှုလှိမ့်ဖို့ကောင်းတစ်လမ်းပါပဲ. ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသူမ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏ပန်ကာမိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ဟာနေထိုင်မှုဘ ၀ မှာဆိုးဆိုးရွားရွားအခက်အခဲတွေ့နေရပါတယ်, ဘုရားရေးရာ attribute တွေဆုံးမandဝါဒပေးခြင်းနှင့်မြှင့်တင် (တိတ်တဆိတ်) သူမ၏အပုဒ်မှ jamming. ဒါဟာတစ်မိနစ်များအတွက်ရုန်းကန်ခဲ့ရဲ့, အထူးသဖြင့်ငါ Houstonian နဲ့သူမရဲ့အတန်းကျောင်းကကျောင်းသားဟောင်းတစ်ယောက်ပါ. ငါဝိုင်းရံထားသည်, ငါပြောမယ်!
Ashanae • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2014 တွင် 12:03 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မင်္ဂလာပါ MichelleJ, ဒါဟာဝိရောဓိဖြစ်လာသောအခါသင်သည်သင်၏အသက်တာ၌ယုံကြည်စိတ်ချခံစားရကြောင်းအလွန်ကောင်းသောနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာပညာရှိသည်. ခရစ်တော်အားဆန့်ကျင်သောဂီတကိုနားထောင်ရန်ဆန္ဒကိုသခင်ယေရှုဖယ်ရှားပေးရန်အကြိမ်ကြိမ်ဆုတောင်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အားတိုက်တွန်းပါသည်။, အဆင်ပြေငါက sugarcoat ချင်ကြဘူး, သူမ၏ဂီတအများစုသည်စာတန်နှင့်တူသော်လည်း၎င်းသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်. သူမ၏ဂီတသည်ခရစ်တော်အားဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်မသိရသည့်အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ပြောပြနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်, သို့သော်လည်းအကျွန်ုပ်ကိုနားထောင်တော်မူပါ. လည်း, တစ်ယောက်ယောက်ကိုရယူပါ(သင်တန်း၏သူချင်းယုံကြည်သူ) သင့်အားတာဝန်ခံမှုရှိစေရန်နှင့်သင်၏ရုန်းကန်မှုကိုသူ / သူမအားရှင်းပြရန်၊. ငါတို့ရှိသမျှသည်အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ရုန်းကန်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ရုန်းကန်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်သခင်ကသူ၏ကျေးဇူးတော်ကိုပေးပါစေ.
P.S. သူမ၏ဂီတကိုနားထောင်ရန်သင့်အားမရည်ရွယ်ဘဲခရစ်တော်ကိုဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်သင့်အားမျှော်လင့်နေသောလူများ၏ရှေ့မှောက်၌သခင်ယေရှုအားရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမနားထောင်ရန်စဉ်းစားမိသည်။. ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသော.
Libb • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2014 တွင် 3:41 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါကျိန်းသေအလားတူမေးခွန်းများရှိသည်. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းအတော်များများကငါ့ကိုတကယ်စိတ်ပူစေတဲ့ Beyonce ကိုကြည့်ကြတယ်. ဒါဟာ sexy ဖြစ်ခြင်းသူတို့သူမ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ရလဒ်အဖြစ်သူတို့အဘို့ကြိုးစားအားထုတ်နေကြသည်အရာဖြစ်တယ်ဝမ်းနည်းဖွယ်ပါပဲ. သူမလည်းအောက်ခံအပေါ်ထားခဲ့ပါတယ်, သူမဒါပါရမီရဲ့နဲ့တူအချို့သောလူများအတွက်, သူမအမှားမလုပ်နိုင်ပါ… သူတို့ကသူမပြောနေတာနဲ့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့သူတို့ကသူတို့ကိုဘယ်လိုသြဇာသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့မစဉ်းစားဘူး… အဖြစ်မကြာမီသူတို့ Beyonce စကားကိုနားထောငျအဖြစ်ကအားလုံးကောင်းပါတယ်, မသက်ဆိုင်မက်ဆေ့ခ်ျကို၏, သောအလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့, ငါ Trip သည်ဤမေးခွန်းများကိုမေးသောကြောင့်အလွန်ဝမ်းသာတယ် – သူမသည်အခြားသူများကဲ့သို့လူသားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူမလုပ်ဆောင်သည့်အရာနှင့်သူမသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏သမ္မတကဲ့သို့သြဇာလွှမ်းမိုးနေသူကိုပြန်ပြောင်းဆင်ခြင်သင့်သည်… သူမနည်းတူအများကြီးမီဒီယာ၌တည်ရှိ၏, လျှင်မပို.
နာတာရှည် • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2014 တွင် 5:06 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဟေးမင်းသိတဲ့ခရီး #5 ကြောင်း haaa ညာဘက်ရှိပစ္စည်းပစ္စယဖြစ်ခဲ့သည်!!!
ကောင်းပြီကိုယ့်သင်ကမကောင်းတဲ့စာနယ်ဇင်းက၎င်း၏အစစ်အမှန်ဆောင်တတ်၏အဖြစ်တာအဖြစ် illuminati ဖော်ပြရန်ရပြီဟုပြောရန်ရှိသည်, သင်ဒီမှာ dmx ၏ခရစ်အားဖြင့်သက်သေခံခြင်းနှင့်၎င်းကိုသိရန် illuminati သည်သူနှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုသည်ကိုသာကြည့်ရှုရန်လိုသည်.
ငါ j-z ကိုတိကျစွာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိပါတယ်ပေမယ့် rihanna နှင့်သူ့ကိုတိုက်ဆိုင်မှုမှ၎င်း၏အားလုံးနည်းနည်းပါဝင်ပတ်သက်ခံရခြင်းမဟုတ်လိမ်လည်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုမပြော.
ငါသူမ၏ဘုရားသခင်ပေးခွက်တဆယ်အဘို့အ beyonce ချစ်ကြတယ်။. သူမ၏ဝိညာဉျ၏အသီး။.
ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌အရက်မူးကိုချစ်သလောက် ( သူမအတွက်ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်သီချင်းတစ်ပုဒ်အနေဖြင့်၎င်းတို့အတွက်သာသီးသန့်တည်ရှိနေသင့်သည်၊ အမေရိကန်မမြင်ရပါ ) ကိုယ့်သူမဖိအားပေးမှုအောက်မှာခံစားရခံစားရပါဘူး, ငါတကယ် rihanna အရာတစ်ခုလုံးကိုသူမ၏ယုံကွညျခွငျးစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ထင်ပါတယ်, သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်, ငါတို့ရှိသမျှသည်အချို့ရှိရမည်နှင့်သူမ၏မိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်း။.
သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းချက်များကိုလိုအပ်သည်!! သင်၏မေးခွန်းများတွင်သူမကိုမတိုက်ခိုက်လိုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, တရားစီရင်ခြင်းထက်ပညာနှင့်ဆေးကြောခြင်းအတွက်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏. သမ္မာကျမ်းစာကကျွန်ုပ်တို့မစီရင်သင့်ဟုဆိုသည်။. သို့သော်လည်းခရစ်ယာန်အများစုသည်ယင်းကိုချိုင်းထောက်တစ်ခုအဖြစ်ယူထားကြသည်. ငါ့မိသားစုလည်းဒီလိုပဲ။. ငါ့ကိုအပါအဝင်။. သင်တို့သည်လည်းခရစ်တော်၏ပုံသက်သေဖြစ်ကြ၏! ဘုရားသခင့သင်နှင့်သင်၏ဂီတကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ, ၀ ိညာဉ်တော်မှတစ်ဆင့်သင်၏ဓမ္မအမှုကိုဂီတဖြင့်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ သူသည်နတ်ဆိုးများ၏ဆိုးကျိုးထက်ဆုတောင်းခြင်းစွမ်းအားသည်ပိုမိုပြင်းထန်သည်။!
ယာကုပ်အမျိုးကို • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2014 တွင် 10:10 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ချင်းမိုင် • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 2014 တွင် 7:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သူမကိုမစီရင်မိဖို့၊ #5 ငါ yu're Jay-z ထက်လမ်းအေးသိတယ်….
Demarcus • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2014 တွင် 7:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါကြိုက်ပြီးဒီတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာဘူး? သင်တို့မူကားနှစ် ဦး စလုံးဘုရားကျောင်း၌သီဆိုသို့မဟုတ်ဘုရားကျောင်းထဲမှာကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ played မှမပေးခဲ့ပါဘူး? မင်းလုပ်သင့်တယ်ထင်တယ်. ငါသည်သင်တို့အဘို့ဆုတောငျးလတာ.
ကေး • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2014 တွင် 8:31 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်မေးမြန်းလိုသောမေးခွန်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. သငျသညျအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပလက်ဖောင်းရှိသည်ကတည်းက, ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်တို့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်. ဘုရားသခငျသညျကောငျး၏, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကအလုပ်များတဲ့အချိန်ကဒီအမျိုးအစားမေးခွန်းများကိုအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းဖြင့်မေးရန်အချိန်ယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်, သူသည်သင်တို့ကိုပွင့်လင်းစွာဆုချလိမ့်မည်. မင်းပြောခဲ့သလိုပဲ, သင်သည်အပြစ်သားဖြစ်လိမ့်မည်, ငါတို့ရှိသမျှသည်ကဲ့သို့, သို့သော်ယေရှုကိုသင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံခဲ့လျှင်, မင်း, ခင်ဗျား, ယခုကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောအပြစ်သားဖြစ်ကြ၏. အာမင်!
Aric • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2014 တွင် 9:30 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါထင်တာကတော့သူမသိပ်မကြာသေးခင်ကဆိုးဝါးတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လာတယ်, စင်ပေါ်မှာတစ်ဝက်အဝတ်အချည်းစည်းသွားသူမည်သူမဆိုအဲဒီအခြေအနေမှာသူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်. ကျွန်မတို့ရဲ့ First Lady နဲ့ပိုပြီးသင့်လျော်တဲ့ဂီတသမားတွေကိုမထောက်ပံ့တဲ့အတွက်အရမ်းစိတ်မကောင်းပါဘူး. အိုဘားမားသည်အကြမ်းဖက်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသည့် seculier ရက်ပ်အနုပညာရှင်အားထောက်ပံ့ပေးရာတွင်အလားတူပင်!
Mwende • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2014 တွင် 1:15 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျမေးခွန်းများကိုရှုမြင်သုံးသပ်ကြသောလမ်းများအတွက်တကယ်ကိုကြီးမြတ်ဖြစ်၏( တစ် ဦး အဘယ်သူမျှမတရားသဖြင့်စီရင်လမ်းအတွက်) အဲဒါကြောက်စရာကောင်းတယ်. ယခု, ကျနော်တို့ကိုးကှယျမှု၏အသက်တာကိုနထေိုငျမှတဆင့်ကိုးကှယျခွငျးဘုရားသခငျ၏ရေယာဉ်များဖြစ် Created ခဲ့ကြသည် (ဆုတောင်းပဌနာ, ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း, သူတို့အဘို့ဘုရားသခငျ၏မတ်ေတာတျောနှငျ့အလိုတော်အခြားသူများကိုသက်သေခံခြင်းနှင့်ဆုံးမteachingဝါဒပေး. ငါတို့ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်ဆုတောင်းပေးရအောင်, သူတို့သည်လည်းဘုရားသခင့်မျက်မှောက်တော်မှတစ်ဆင့်တွေ့မြင်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့လည်းဘုရားသခင့်လုပ်ငန်းတော်သက်သေခံချက်အနေဖြင့်လောက၏နည်းလမ်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိစေရန်ဖြစ်သည်.
သည်းခံခြင်း • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2014 တွင် 12:13 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါ့ကျောင်းကကလေးတွေအများကြီးငါ့ကိုရွေးချယ်တာပေါ့။ ငါကငါ့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ချင်တယ်၊ ငါ့ကျောင်းကိုလာပြီးငါနဲ့သူမသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတွေကိုပြောပြဖို့ငါဘေယွန်းကပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်
Jess • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2014 တွင် 2:03 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မေတ္တာ • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 13, 2014 တွင် 12:23 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါလေးပါးတို့ (မေးခွန်း5အားလုံးငါ့စိတ်ကိုဖြတ်ကျော်မထားပါဘူး, ငါသည်သင်တို့ကိုအေးသည်ဟုထင်ပါတယ်) မေးခွန်းများကိုအားလုံးအကျဉ်းချုံး 100 ငါ Beyonce အဘို့ရှိသည်တ.
ယူလာ • မတ်လ 2, 2014 တွင် 2:57 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားရှင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုမျှော်လင့်သောအပြစ်သားနှစ် ဦး စလုံးသည်ဟုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်. သူမသည်သူမ၌ရှိသကဲ့သို့ပြုမူခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ပါတယ်. ကြည့်ရတာများလွန်းလို့စိတ်ရှုပ်စရာလွယ်လွယ်ကူကူရတယ်. သူမသည်အမြဲတမ်းဒီဘ ၀ ၌ပိုမိုများပြားလာလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သူမ၏ကောင်းကင်ဘုံဖြစ်သည်. မာရ်နတ်သည်သူ၌ဤအရပ်၌ ရှိ၍ ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ မယုံသည်ကိုသူမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုပြသည်. သူဟာဖဲမဟုတ်လို့မိုက်မဲတာမဟုတ်ဘူး, သို့သော်သူသည်ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဘမဟုတ်ပါ၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်ထက် ပို၍ ချစ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းတို့ကိုဘယ်တော့မျှမပေးနိုင်ပါ. ကြေးဇူးတငျစကား
ဖြစ်လိမ့်မယ် • မတ်လ 11, 2014 တွင် 4:01 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါဒီ post ကိုကြိုက်တယ်! ဤရွေ့ကားအချို့သောကြီးမြတ်မေးခွန်းများကိုဖြစ်ကြသည်. အနုပညာရှင်တွေကသူတို့လူငယ်တွေအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကြောင်းမေ့တတ်ကြတယ်, သို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်လူ, ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်ဖိအားနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုပမာဏကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ.
Tiffany • ဧပြီလ 3, 2014 တွင် 9:55 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Awesome ကိုဆောင်းပါး. နာခံမှုရှိခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. သင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုကောင်းချီးပေးပါစေ.
အက်ရှလေ. • ဇူလိုင်လ 14, 2014 တွင် 10:29 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂျူလီယာပွတ် • အောက်တိုဘာလ 14, 2014 တွင် 10:08 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
JayZ ထက် Waaaaaaayyyyyy ပို၍ အေးသည်. Waaaaaaaaaaayyyyyyyy.
ဖေါ်ပြ: ယရှေုခရအင်ပါယာ | သင်းအုပ်ဆရာ-ဟာ Rapper ခရီးစဉ် Lee ကဆွေးနွေးပွဲ '' ထရန်လူငယ် Calling’ နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဆင့်အပေါ်ပရိသတ်များမှမှု (ဗီဒီယို)
ဖေါ်ပြ: Pastor-Rapper Trip Lee Talks Calling Youth to 'Rise' နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဆင့်အပေါ်ပရိသတ်များမှမှု (ဗီဒီယို) - Social News Dashboard
တိုက်ရိုက်လိင်ပြပွဲ • ဇူလိုင်လ 29, 2019 တွင် 2:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်